Kedu ihe bụ ihu igwe nke gale | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ime ụbọchị ndị na-adịbeghị anya mpaghara mpaghara Cantabrian dum na-ahụ otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu na ihu igwe ihu igwe n'oge ahụ n'afọ, ọ bụ elele. Ọ bụ ezie na n'aha ya nwere ike ịdị gị ka ' O nwere ike ịbụ na ị maghị ihe ihe a mejupụtara, ya mere aga m akọwara gị ya iji mee ka o doo gị anya.
Uzo a na - aputa mgbe ikuku ikuku abuo meguru, otu n’ime ha akọrọ ma kpoo oku ma onye ozo bu iru mmiri na oyi. Ihe mberede a ga - eme ka ikuku ikuku na ikuku puru ihe ruru 100 kilomita kwa elekere na dobe na okpomọkụ nke ruru 10 degrees ma e jiri ya tụnyere nkezi nke oge. Ihe a niile na - esokarị oke mmiri ozuzo na oke ifufe nke na - ebutekarị ebili mmiri na oke osimiri ruo mita 9.
Ihe kachasị mma banyere gale bụ na ọ bụ ihe ihu igwe nke na-ewekarị minit ole na ole, na-ebute ihu igwe mmiri na mmiri ozuzo, mana na-enweghị nsogbu ọ bụla. Dịka m gwara gị, ụbọchị ole na ole dum mpaghara Cantabrian na-arịa ọrịa a na-eme ka ifufe nwere gusts nke 90 km / h na mmiri ozuzo karịrị milimita 40 kwa mita mita. N’afọ 1961, otu n’ime akụkọ mbibi kachasị njọ n’akụkọ ihe mere eme mere dịka ọ kwụsịrị na-akpata ọdachi jọgburu onwe ya nke ọnwụ 83 n'ihi oke ifufe ifufe na oke mmiri ozuzo nke dakwasịrị mpaghara ahụ dum.
Ka ọ dị ugbu a, ọ ga-ekwe omume ịmara nke ọma tupu oge arụpụta ama ama ga - arụpụta ma si otú a zere mmebi ihe na mmebi onwe onye. Ọ bụ ya mere n'agbanyeghị na ọ bụ ihe egwu dị egwu, Enwere ike ịchịkwa ya n'ime ntọala siri ike ma zere mmebi dịka nke ahụ mere n'oge 1961.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu ihe bụ ihu igwe nke gale
Mgbanwe ihu igwe nke oge a malitere afọ 180 gara aga